Waraysigii Ugu Dambeeyey Ee Diego Armanda Maradona Uu
Halyeygii kubadda cagta ee Diego Maradona ayaa loo baroor-diiqayaa kaddib dhimasho degdeg ah oo ku timid markii uu wadnuhu istaagay isagoo jooga gurigiisa ku yaalla waddankiisa Argentina.
Hordhaca kulanka Liverpool vs Man United
Madaxweynaha waddanka Argentina ayaa ku dhawaaqay saddex maalmood oo ‘baroor-diiq qaran ah’, halka dunida kubadda cagtuna ay soo bandhigayaan sida ay uga murugaysan yihiin geerida mucjisadan waddankiisa u qaaday Koobka Adduunka.
Maradona ayaa xuska dhalashadiisa u dabbaal-degay isaga oo xanuunsanaya, waxaana qalliin lagu sameeyey October 30 oo laga joogo wax ka yar bil, markaas oo laga daaweeyey dhiig madaxa kaga furtay iyo xiddiddo ay gunteen xinjiro.
Maalmo ka hor intii aan lagu samaynin qalliinka ayuu Diego Maradona waraysigii ugu dambeeyey noloshiisa siiyey wargeyska Clarin, waxaanu kaga hadlay arrimo badan oo ay ka mid tahay kooxda uu waqtigan tababaraha u ahaa ee Gimnasia ee ka dhisan Argentina.
Intii uu socday waraysigu, waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay sida ay wali dadku u jecel yihiin, isagoo xusay in jacaylka loo qabo ay u muuqato inuu yahay mid aan dhamaad lahayn.
“Dadku wali way i jecel yihiin, waxaanan dareemayaa in jacaylkoodu aanu ahayn mid dhamaanaya.” Ayuu yidhi Maradona.
“Waxaan u mahad celinayaa dadka. Maalin walba way iga yaabiyaan, waxa aan la kulmay intii aan kubadda cagta Argentina kusoo laabtayna waligay ma illoobi doono.
“Xataa waxay kasii badatay wixii aan qiyaasayay. Sababtoo ah waqti badan ayaan waddanka dibedda kaga maqnaa, mararka qaarkoodna waxaan layaabaa haddii dadku wali i jecel yihiin, haddii ay dareenkaas sii wadi karayaan.
“Waxaan soo galay garoonka Gimnasia maalintii la isoo bandhigayay (tababaraha maalintii uu noqday) waxaan dareemay in jacaylka dadku ii qabaan uu yahay mid aan dhamaanayn.
Mar la weydiiyey haddii ay jiraan waxyaabo uu ka qoomamoonayo oo intii uu noolaa uu soo sameeyey, waxa uu yidhi: “Waan faraxsanahay. Kubadda cagta ayaa isiisay wax walba oo aan haysto, in ka badan intii aan malaysanayay. Haddii aanan balwaddaas lahayna waqti badan ayaan sii ciyaari lahaa.
“Laakiin maanta taas waa laga yimid, waan fiicanahay waxa aan inta ugu badan ka qoomamoonayaana waa in aanan haysanin waalidiintay.
“Mar walba waxaan rajeeyaa, inaan waqti la joogi lahaa Tota laakiin waxaan ogahay inay jannada dhexdeeda (waa sida uu sheegay) ay iiga hanweyn tahay oo ay faraxsanayd.”
Mar la weydiiyey waxa uu Argentina u rajaynayo, waxa uu yidhi: “Waxaan u rajaynayaa in dhibaatada (Korona Fayras) ay sida ugu dhakhsaha badan ee ugu suurtogalsan u dhamaato, taas ayay Argentina-daydu hore ugu socon kartaa.
“Wanaag ayaan u rajaynayaa Argentina oo dhan, waxaynu haysanaa waddan qurux badan, waanan ku kalsoonahay madaxweynaheedu inuu awood u leeyahay inuu innaga saaro waqtigan.
“Aad ayaan uga murugoodaa marka aan arko carruur aan haysanin wax ku filan oo ay cunaan, waxaan garanayaa gaajada, waxaan garanayaa sida aad dareemayso marka aanad maalmo waxba cunin, taasina maaha inay ka dhacdo waddankayga.
“Waxaan rajaynayaa inaan arko reer Argentine oo faraxsan, shaqaysanaya oo maalin walba wax cunaya.”
axadle 5763 posts
“Mucjiso Aan Cidna La Barbar-dhigi Karin Ayaa Geeriyooday,
Shaxda Rasmiga Ah Inter Milan vs Real Madrid – Xiddigaha